FARIIMAHA IS KHILAAFSAN EE MUUSE IYO WASIIRKIISA DIINTA.
Monday, 01 January 2018 02:58
Madaxweynaha Xukuumada Jeegaanta Baho Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka reer Somaliland ugu hambalyeeyay Dhalashada Sannadka cusub ee Miilaadiga ah ee 2018.
Dhanka kalena Wasiirkiisa Diinta iyo Aw-Qaafta Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa Shir Jaraaid oo uu qabtay ku mamnuucay islamarkaasna sheegay inay xaaraan tahay Dabaaldegyada iyo Hambalyada Sannadka Miilaadiga loo sameeyaa isagoo ku dheeraaday sida aanay u waafaqsanayn Diinteena suuban ee Islaamka.
Waxaase la yaab leh haddii Sunnaha Nebiga NNKH la oofinayo waa arrin wanaagsan oo aan shakhsiyan aad u soo dhawaynayo, Allena SWT aan uga baryayo Dadkeena iyo Madaxdoodaba Inuu xaqqa waafajiyo.
Hase yeeshee waxaa iswaydiin mudan ma jirtaa meel lagu soo weriyay in Cahdigii Nebi Maxammed NNKH ama Xukuumadihii Islaamiga ahaa ee ka dambeeyay sida Cahdigii Abubakar Sidiiq, Cumar Bin Khidaab iyo Cismaan Bin Cafaan tusaale ahaan ay qabsan jireen ama iclaamin jireen Balanqaadyo ku salaysan wakhti cayiman sida 100 cisho ee ugu horeeya waxaanu qabanaynaa waxaas iyo waxaas iwm.
Balanqaadyada wakhtiga ku cayiman (timescales) ayaa ah fikirkayga kuwo laga soo amaanaystay Reer Galbeedka. Waxaa qofka Muslimka ah looga baahan yahay inuu la yimaado Qorshe cad, Dadaal Daacadnimo ku dheehantay iyo fulin buuxda oo hagrasho la’aan ah. Intaas markuu la yimaado wax kastaaba waxay ku fulayaan wakhti macquul ah oo xagga Allah SWT ka sugnaaday, ummada loo adeegayaana ay raali iyo maqsuud kaga noqon karto.
Waxaa kale oo iyana iswaydiin mudan ama Daraasad aqoon ku dhisan u baahan haddii la rabo in Maryaha la xidhanayo ay noqdaan kuwo ku salaysan Dhaqankeena iyo Diinteena suuban, horta waa maryo noocee ah, ma la isla meel dhigay.
Haddii wiilka dhalinyarada ah ee Hargaysa ama Boorame jooga u lebisto sida Jilayaasha filimada Hollywood ka metela ama sida dhalinyarada Dawladaha reer Galbeedka ku nool, bal iyaga ka warama kuwa Madaxda u ah sida Madaxweynaha, Ku-xigeenka iyo Wasiirada u lebisan sida Donald Trump, Putin iyo Macron Suudhka iyo Niiktaynka ku cayuuqan kulaylaha aad aragteen. Kuwani iyagu miyaanay sunnihii Nebiga NNKH baalmarsanayn.
Inuu Wasiirka Diinta iyo Awqaaftu ka hadlo keliya Dharka dhalinyaradu xidhataa maxay isaga ka sheegaysaa?
Waxay iila muuqataa in Xukuumada Jeegaanta Baho Kulmiye ee Kornayl Muuse Biixi runtii taladu ka baahsan tahay, meel ay wax ka bilaabaana ay garan la yihiin.
Dalka Waxaa ka jira arrimo waawayn oo masiiriya oo sii jiritaankii Somaliland midaysan, madax-bannaan oo Caalamka ka hesha Ictiraaf ama siiba ahaata De-facto state khatar ku ah. Arrimahaas ayaa looga fadhiyay in Xukuumadan loo tanaasulay Qorshayaal wax lagaga qabanayo u keento loogama fadhiyin inay Timaha dhalinyarta ku mashquusho.
Haddii arrinku marayo Timo la isu xiiro, dee Af-hayeenka Madaxweynaha ee Dhafoorada Xiirtana ha loo dhukuro.
Mohamed Aw Yuusuf Guun
More in this category: « Shaqaalaha Dahabshiil Group Oo Tacsi Tiiraanyo Leh U Diray Marxuum Axmed Yaasiin Gaba-xaddi Oo Emaratka Ku Geeriyooday SCAMA Website: Another Manifestation of Somalia Aviation Scams »